Michummaa Isuu fi Abbichuu |
Home Afaan Oromoo Michummaa Isuu fi Abbichuu
Damee Boruu: Waxabajjii 09/2020
What do you read from Abiy’s face when he was looking at Isuu?
Waan kononeel Abiyi dubbate keessa inni guddaan “nama ajjeessuun moo’amuu “jedhu baayyeen jaaladha. Jecha isaa bareedaa dha jenne fudhanne. Mee yaroof dhumaatii Uummati Oromoo, Sidamaa, Qimantii fi Beninshaagul yaroof haa dagannu. Warra haxxummaan inni ajjeessa jiru keessa Injireer Simegnew Bekelei, Dookter Ambaachew Mekonnen, B. J. Asaminew Tsigee fi L.J. Saree Mekonnen ajjechaa Kononeel Mangistuu Haayile Maariyaam irraa adda miti. “Kana booda namni seera malee mana hidhaa seenuuf ajjeefamu hin jiru” jechaa namoota kumaatama hidhuu fi ajjeessuun Impaayeera Itoophiyaa guutuu keessatti hojii motummaa isa keessaa isa duraa tahaa jira. Tooftaan kun aangoo isaa jabeessuu fi halayyaa isa buusuu keessa tokko hin oolu.
Bar warra abbaa irree isa dura turan irraa gaadiddu tooftaa isaanii waraabatee ittiin deemaa Jira. Kononeel Mangistuu Haayile Maariyam gaafa duraa Dura Taa’aa Dargii L.J. Mikaa’el Andoom Ajjese. Itti aansee ammas Dura Taa’aa Dargii kan tahe B.J. Tafarii Bantii fi misensota Dargii warra sodaa irra qabu warra Mogesii fi Alemayehu Haayilee ajjeesse. Dhuma irratti Itti aanaa isaa Kononeel Axinaafuu Abaatee ajjeessee aangoo hunda harka isaa jalatti galfate. Sana booda amma inni aangoo gad dhisee frinxixxee badu itti namni hunduu Kononeel Mangistuuf jilbeefatee sagadaa ture. Kana qoratee beeka.
Kononeel Abiyi nama barate of fakkeessuuf falaasumaa kijibaa ida’amuu jedhu tokko qabatee as bahee jira. Biyyi Tgrayi biyya inni keessa seenuu hin daneenye taate utuu jirtu waa’ee ida’amuu lalaba. Ida’amuu jechuun walitti dhufuu fi walitti dabalaman tokko tahuu jechuu dha hiikaan isaa afaan kamiinu. Ida’amuu jechuun gargar bahu yookaan gargar cabuu miti.
Kitaaba dogongoraa Ida’amu jedhu kana mana barumsaa itti gurgurachaa jira kan jedhu oduun jira. Kitaaba mana barumsaa kan qopheessu qabu namoota oggumaa fi beekumsa barumsaa qaban malee nama aangoo qaban tahuu hin qabu. Yaroo kana manni barumsaa cufaa waan tahee maal akka tahuuf deemu beeku hin dandeenyu. Haa tahu malee kitaabni kun qor-qalbii, aadaa, afaan fi seenaa ijoolleen keenya barbchuu qabdu irratti dogongoraa guddaa waan uumuuf fudhatama hin qabu.
Tigrayiin diina godhachaa Eritrea fira godhachuuf tattaafachuun waan hin fakkaanne. Namni kun duraan dursee Prezedantiin Ertirea Isiyaas Afeworqii eenyu akka tahe bareechee hubachuu qaba. Jaalalli halkan tokkotti akkasi isa gagabsu kun walaalummaa isaa agrsiisa. Isiyaas Afeworqii Impaayeera Itoophiyaa diiguuf waggaa sodomaa ol lolee biyya isaa bilisa baasee jira. Impaayeerri Itoophiyaa akka jiru kanatti yoo hafte yoom iyyuu Eritreaf yaadoo guddaa dha.
Impaayerri Itoophiyyaa yoo caccabee biyyoota xixiqqoo tahe biyya Ertireaf yaadoon isa ni salphata. Tigrayi yoo qofaa baate biyya taate Ertirea sodaachisuu hin dandeessu. Qabeenya dinagdee fi humna namaa olaa ishee ittiin yaadessuu dandeessu hin qabdu. Ertirean biyya Jibuutii sodaatee utuu hin rafiin hin bultu. Qabeenyaa fi humna namaa Jibuutiin qabdu eenyuunuu cabsuu hin danda’u. Keessattuu Impaayerri Itoophiyaa yoo biyyoota xixxiqaatti cacabde Ertirean nagaa argatti. Isiyaasa Afeworqii nama afuuftu akka Kononeel Abiyi kana argatee qilleensa keessaa baasaa jira.
Dhuguma Isiyaaas Afeworqii Impaayerri Itoophiyyaa deebisee ijaaruuf jedhee Kononeel Abiyi wajjin fiigaa jiraa? Keessaa iyyuu adda bahuu Eritrea tole jedhee kan hin fudhanne Amhaara bira deemu walaalee miti. Isiyaas Afeworqii do’ittii biyya Gondor deemuun TPLF dalansiisuu malee fi Impaayeera Ittoophiyyaa deebisee ijaaruuf dadbabaa jira jedhee hin yaadu. Akka natti fakkaatu itti gargarumma TPLF fi Kononeel Abiyi jiduu jiru bal’isuuf boola gad fageessee qotaa jira. Impaayerri Itoophiyyaa deebitee kan ijaaramtu yoo tahe dura kan deebi’iuu qabu Eriteraa akka tahe Isiyaas Afeworqii ni beeka. Kanaafuu inni hojii Impaayera Itoophiyyaa deebisanii ijaaru keessa hin jiru. Yoo danda’e Kononeel Abiyyi daangaa irratti wal dhibaa jiran kan akka Badamee fi Zalaa Anbasaa dhoksaan akka malateessuuf barbaada. Hojii isaa kana irraa kan ka’e ammaan booda Mootummaan TPLF fi Motummaan Kononeel Abiyi karaa nagaa akka walitti dhufan waan godhu jira hin fakkaatu.
“Yaa gowwe bala agarte malee boola si duuba hin agarre” jedhe. Isiyaas Afework achi fageesse nageenya Eritreaf nama yaaduu fi hojjechuuf dandeetti qabu dha. Isiyaas Afework nama siyaasaa Impaayyerri Itoophiyaqa keessatti guddatee fi keessatti duloomee darbaa jiru. Karaa deemtuu akka Kononeel Abiyii morma micciree nama boola keessa kaa’ee bira darbu dha. Yoo Isiyaas Afeworqii Kononeel Abiyiif gorsa laatee jiraate kan karaa irraa isa maksee dictaatara tahee daddaffin akka gombisamu kan isa godhu duwwa taha. Isa wajjin dhaabbatee akka TPLF aangoo irraa darbuu hin dandeenye dura darbee hubachuu qaba. Oromiyaa dhufees WBO irraa ittisuu akka hin dandeenye maaliif arguu dagata?
Impaayera Itoophiyyaa irreen bulchuun kan yaroon isaa itti darbe tahuu warra isa dura turan irraa barachuu qaba ture. Ayyaana bareedatu isa darbe. Humna fi qabeenya Uummata Oromoo qabatee Impaayeera Itoophiyyaa dangaa amma dangaa bulchuu fi dimookraatessuu kan danda’u harka isaa keessa facaase. Rakkinni isaa naaf gala. Dhiiga Oromoo waan of keessaa hin qabneef Oromoo wajjin dhaabbachuu irra Oromummaa balleessu kan filate waan jibinsa Oromoon guutamee guddateef.
Biyyi Norway fi akeekni Badhaasni Nageenya Noobil dhaabbateef koree namoota badhaasamuu qaban filatuu qaanii guddaa itti haguugisanii jiru. Kononeel Abiyi biyya Eritrea deemee isaa buna hiruu malee isaa hariiroo nageenyaa fi araara biyya Eritrea fi Itoophiyya jedhu jiru dubbatu hin agarare. Walitti dhufeenyi Isuu fi Abbichuu walitti dhufeenya bunaa nama lama jidduu jiru ture. Maal arganii nama kanaaf badhaasa kennuuf dirqaman? Yaroo inni gaazexesitoota itti gadi bahee hin dhubadhu jedhu maaliif akka sobaa jiru shakkuu dhadhaban?
Mootummaan Kononeel Abiyi nama adamsuu, hidhuu fi ajjeessuu, qabeenya uummata saamaa fi barbadeesaa akka jiru afaan keenya irraa utuu hin taane afaan Aminsitii Internaashinalii irraa dhagaa jiru. Namni kun waan kijibaan badhaasa fudhate kana deebisuun warra hin dhiiga dhangalaasaa jiruuf gumaa baasuu tahuu danda’a.
Previous articleGudeelcha akka sabaatti nurra kaahamu, akka sabaatti of irraa darbanna!
Next articleJoint statement by OLF & OFC on the illegal Extension Term of Government